fanesorana fonosana fampidirana ho an'ny fanesorana ny loko amin'ny rafitra fanamafisana induction
Fanesorana fonosana induction fitsipika
Ny disonika fampidirana dia miasa amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fampidirana. Ny hafanana dia miteraka ao anaty lasitra vy ary tapaka ny fatorana. Ny fonosana dia esorina tanteraka nefa tsy rovitra ary afaka tanteraka amin'ireo mpametaveta mandoto, izany hoe ny fipoahana haino aman-jery. Mazava ho azy fa manamora sy mora vidy kokoa ny fanary sy fanodinana ny fako. Na dia ao anatin'ireo pittings sy triatra eny ambonin'ilay rindrina aza dia noroahina.
Ny fanamainana HLQ Induction dia miasa amin'ny alàlan'ny famindrana haingana ny angovo mankany amin'ny substrate vy, vokatr'izany fiantohana ny fanamainana hafanana ny etana sy ny fanesorana haingana ny ankamaroan'ny karazana fonosana.
Inona no fanesorana fonosana fampidirana?
Ny HLQ Rafitra fanesorana fonosana fampidirana dia fitaovana fanamafisam-peo fampidirana farany manaparitaka haingana ny loko sy pataloha matevina sy manamboatra avo. Izy io dia fomba haingana kokoa sy madio ary azo antoka kokoa hanesorana coatings.
Fanamorana ny induction dia mety hihoatra ny fomba fanesorana ny loko nentim-paharazana. Ny fanapoahana mahery vaika na ny fitotoan'ny kapila dia mazàna miasa mafy kokoa ary miaraka amin'ny olana hafa toy ny vidin'ny firaketana na ny fikojakojana sy ny fanangonana ny haino aman-jery fipoahana, miampy ny filtration na ny fisarahana ireo fitaovana fanosotra azo ariana. Amin'ny tetik'asa an-tanàn-dehibe maro, ireo no tena dinihina ary tena lafo vidy tokoa. Na izany aza, rehefa esorina amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo firakotra, ny hany fako dia ny firakotra ihany izay amin'ny ankamaroan'ny tranga dia azo sasana na hosorana toy ny fako atrikasa rehetra.
azo antoka kokoa miasa tontolo iainana: Ny hafanana voafehy sy voafaritra dia miteraka setroka mihena be sy vovoka misy poizina.
Easy manadio: Ny lamba firakotra matetika dia mipoitra amin'ny flakes fa tsy mikororosy.
Tsy mitabataba hetsika: Afaka miasa amin'ny faritra ampahibemaso ny mpandraharaha nefa tsy miteraka fikorontanana.
Mobile: Ny fitaovana dia henjana sy azo ianteherana nefa maivana ihany ary mora mihetsika manodidina ny worksites.
mihena angovo fihinanana: Ny fandefasana hafanana haingana, marina ary miverimberina dia mahatonga ny fizotry ny fanesorana ny coating ho angovo tena mahomby.
Fomba mora azo: Fanafana ny toerana, scanning, freehand ary semi-automatique.
Tsy misy fetra: Ny rafitra dia azo ampiasaina amin'ny sehatra fisaka, ny boribory manodidina, ny zoro anatiny / ivelany, ny lafiny roa amin'ny substrate, ny rivet boribory sns.
Ny fanesorana ny induction coating dia ampiasaina amin'ny indostria maro, toy ny sambo / an-dranomasina, tranobe, tanky fitehirizana, fantsona, tetezana ary any ivelany.
ny fanafanana fampidirana dia mitaky fampiasana arus ankehitriny sy coil fampidirana hiteraka saha elektro-manatanjaka matanjaka. Rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy dia miteraka hafanana ambanin'ilay firakotra amin'ny vatan-tsolika ity saha ity, ka miteraka haingana sy mora ny fametahana ilay fefy avy amin'ny metaly.
Ao amin'ny Alliance, ampiasainay ity fomba hanesorana ireo firakotra amin'ny vy toy ny:
Famonoana marobe ahitana epoxies, urethanes ary hafa
Famonoana afo (PFP)
Voaro mifatotra sy vita volo ary koa fingotra vita amin'ny kôlôro
Fanesorana ny valin'ny induction amin'ny tanky fitehirizana -
The Induction Heating System ho an'ny fanesorana ny palitao dia tena mety amin'ny fanesorana haingana ny haben'ny velarana lehibe na ho an'ny fizahana ny valin'ny lasitra ao anaty fitoeram-bokatra. Ny traikefa amin'ny asa amin'ny faran'ny tanky dia naneho fa ny fibre vera matevina (5-6 mm) dia azo esorina amin'ny taham-paosotra hatramin'ny 10-12 m2 / ora. raha ny rafitra hosodoko nentim-paharazana manify kosa dia azo esorina amin'ny taha 35cm / ora.
Tsy ny rafitra fampidirana ihany no ahazoana tombony ara-toekarena lehibe toy ny taham-pahalalana avo lenta ary fanariana fako farafahakeliny, fa ahafahana miaro ny tontolo iainana ihany koa - ary ny fiaraha-miasan'ny mpiasa.
Fanesorana ny firakotra amin'ny induction -
Ny rafitra fanamafisam-peo HLQ Induction Heating ho an'ny fanesorana ny palitao dia voaporofo fa tena mandaitra amin'ny fantsona sy ny tetikasa fantsona mivantana eran'izao tontolo izao. Izy io dia manala amin'ny fomba mahomby sy soa aman-tsara ny fonosana toy ny Coal Tar, Ebonite, 3LPE / 3LPP, fingotra ary firakotra henjana hafa miaraka amin'ny hateviny hatramin'ny 30 mm.
Ny fanesorana ny palitao miaraka amin'ny HLQ Technologies dia lafo ary tsy mamokatra grit na fako rano fanampiny, manome fahafaha-mitahiry vola be amin'ny fikirakirana lojika, indrindra any amin'ny faritra lavitra. Ny coatings dia esorina mora foana amin'ny tadiny na sombin-javatra mora apetraka ao anaty kitapo fako. fanariana tsy misy atahorana ho voaloto amin'ny rivotra, tany na rano.
Ny elanelana miasa amin'ny singa lehibe dia hatramin'ny 100m izay mamela fiasa miovaova sy mahomby. HLQ dia namolavola vahaolana misy patanty izay manafoana ny mety hisian'ny hafanana be loatra ambonimbony rehefa mampiasa ny rafitra fampidirana amin'ny vy. Izany dia fepetra takiana amin'ny fizahana fahazoana ekena amin'ny alàlan'ny fantsom-pitrandrahana solika mivantana sy entona mivantana.
Sokajy 未 分类 Tags fanesorana coating, fampidirana fanesorana coating, fanesorana ny coating amin'ny fantsona, fanesorana coating amin'ny vy, fanesorana coating amin'ny tanky, fanamainana fanosorana induction, fanesorana fonosana fampidirana, rafitra fanesorana firakotra fampidirana, fanesorana loko hosodoko, fanamafisana ny fanesorana loko, fanesorana loko Post Fikarohana